Jabra J.Randall 85t, na n'elu nke ọdịyo mma na mkpọtụ kagbuo | Akụrụngwa Akụkọ
Jabra Elite 85t, na elu nke ogo ọdịyo na nkagbu mkpọtụ
Miguel Hernandez | 04/07/2021 11:52 | Ndị na-ekwu okwu, General, Foto na ụda, Nyocha
Jabra bụ ụlọ ọrụ ọdịyo nke soro anyị na ngwaahịa maka mkpa niile ogologo oge, anyị na-akwado ka ị lee anya na nyocha anyị gara aga iji nweta echiche. Oge a anyị ga - ezute otu n’ime ngwa ahịa kacha dị ọnụ ala n’ihe niile Jabra rụpụtara rue taa.
Jabra Elite 85t ekweisi na-ebili Apple na Sony ndị ọzọ na-enweghị ihe mgbagwoju anya. Chọpụta anyị Jabra Elite 85t ndị a na nyocha miri emi banyere ogo ọdịyo ha na nkagbu mkpọtụ ha, ị ga-atụ uche ya? Ọ dịghị ma ọlị.
1 Nzube na ihe: Sense karia aesthetics
2 Njikọta na ngwa
3 Ogo ọdịyo
4 Nkagbu mkpọtụ na obodo kwụụrụ onwe ya
Nzube na ihe: Sense karia aesthetics
Jabra, n'agbanyeghị na o guzoro maka ike na ogo nke mgbakọ nke ngwaahịa ya, ọ bụghị na ọ bụrịrị ama ama maka ụdị kachasị mma. Naturedị a gosipụtara ọzọ na Jabra Elite 85t, ekweisi na-adịkarịghị mma na ahịa. N'ozuzu ha dị oke ma buru ibu, ma ha anaghị apụta ìhè. N'okwu a, anyị anwalela mbipụta na-agwakọta ụda ojii na ọla kọpa na isi nkọwa. Agbanyeghị, a tụrụ ihe niile na Jabra.
Igweisi: 23,2 x 18,6 x 16,2 mm
Ileba: 64,8 x 41 x 28,2 mm
Igweisi: 6,9 gram ọ bụla
Ileba: gram 43,7 ọ bụla
Emere ya ka ọ daba na ntị anyị ma dabere na ya. Na mkpokọta, ha nwere ntụsara ahụ maka ndị ọrụ na-anaghị "ajụ" ekweisi ntị. Agbanyeghị, ekwesịrị m ikwupụta na enweghị m ahụ iru ọ bụghị na ekweisi ndị a karịchaa, mana ndị niile nọ n'ụdị a, nke na-agaghị emetụta nyocha anyị n'ụzọ na-adịghị mma. N'ụzọ dị otú a, na nkenke, anyị na-abịa ná nkwubi okwu na ndị a Jabra Elite 85t abụghị ekweisi ziri ezi nke ga-enwu maka ọmarịcha ụdị ha, mana maka ogo ha nke iwu na ergonomics.
Ndị a Jabra Elite 85t nwere njikọ Bluetooth 5.0, nke ga - enyere anyị aka ịme njikọ ikuku na - akpaghị aka ozugbo anyị wepụrụ ha n'okwu ahụ. N'akụkụ a, ọrụ bụ ihe a ga-atụ anya n'aka ụlọ ọrụ ahụ. Anyị nwere nnyefe codec Sbc n'ihi na egwu na "ụwa" usoro na anyị na-aga na AAC Apple nwere maka mgbe anyị jiri Mac, iPhone ma ọ bụ iPad. N'otu aka ahụ, ekweisi ekwekọrịtara na ụdị ngwaọrụ niile.
Ngwa maka iOS> Jikọọ
Gam akporo App> njikọ
Ngwa, nke anyị nwalere na nyocha ndị ọzọ, gbakwunyere. Via Jabra +da +, maka iOS na gam akporo, ị ga-enwe ike ịhazi ọtụtụ oke nke ekweisi ga-eme ka ahụmịhe gị zuru oke. Ngwa a bụ ezigbo enyi ga - enyere anyị aka ịhazigharị ọkwa ise nke mkpọtụ mkpọtụ na nke ọma Chika Okpala Iji belata mkpọtụ ikuku, họpụta onye enyemaka olu, enwere ike ịchọọ ekweisi anyị yana mmelite niile dị na App (na vidiyo anyị ị nwere ike ịhụ ya na arụmọrụ).
na Jabra Elite 85t Ha bụ ọrụ a rụzuru nke ọma na usoro nke ekweisi ekweghị ekwe ezi (TWS), ebe anyị na-ahụ ezigbo arụ ọrụ, ọbụghị na nyocha anyị. Ọ na-anọ n'otu ọkwa dị ka ndị ọzọ na-asọmpi ya na ahịa ma a bịa na ọnụahịa ọnụahịa, n'ezie, nke ahụ bụ opekempe nke a ga-atụ anya ya.
Ọkara na elu: Anyị na-achọta ezigbo ihe nnọchianya nke ụdị a na-ahụkarị, nwere ike ịgbanwee n’etiti ha, ike mmụọ na karịa ikwesị ntụkwasị obi n’ihe metụtara ụda emit. Olu ndị na-abụ abụ na ule anyị na Artic Monkeys na Queen ka emegharịrị n'ụzọ ziri ezi.
Dị ala: N'okwu a, Jabra nwere ike ịbụ "azụmahịa" site na ịnye ezigbo bass, ọ bụ eziokwu na ọ na-atọ ha ụtọ na ụfọdụ egwu egwu ugbu a, mana ha na-abanye n'ime ọdịnaya mgbe anyị gbanwere n'oké nkume.
Ka o sina dị, enwere ike imeri isi ihe ae kwuru na mbụ nke bass enwekwuru ike site na ime mgbanwe na nhazi ihe nke ngwa. Ọ na-efu efu ikekwe na ha họọrọ nke ọdịyo ihe ọzọ "na-achọ" na aptX codec.
Banyere oku ekwentị, Igweisi a egosiputa ezigbo mmepe nke mkparịta ụka, anyị achọpụtala na ọ bụghị naanị na anyị na-anụ nke ọma, mana na-anụkwa anyị nke ọma, n'agbanyeghị ọnọdụ nke ifufe na mkpọtụ mpụga na-edozi nke ọma.
Nkagbu mkpọtụ na obodo kwụụrụ onwe ya
Banyere nkagbu mkpọtụ, ekwesiri ịmara na achọpụtara m na ọ dị ezigbo mma na ikekwe anyị nwere ike itinye ya n'etiti mkpọtụ mkpọtụ ise kacha mma nke ngwaọrụ Ezi Ikuku. Ọnọdụ HearThrough Ọ na-emezu ihe achọrọ, ọ bụ ezie na ọ bụ eziokwu na ọ naghị eru ọkwa nke ndị asọmpi na ụdị AirPods Pro-style "nghọta", mana ọ na-edozi ya n'ụzọ dị ịrịba ama. Maka iji ya eme ihe oge niile, nkagbu mkpọtụ ya ezughị oke ma ọ na-emezu ma ọ dịkarịa ala ihe ọ kwere nkwa.
Na Qi wireless na-akwụ ụgwọ
Banyere obodo kwụụrụ onwe ya, ụlọ ọrụ ahụ kwere anyị nkwa karịa awa ise nke egwu playback gara n'ihu ma ọ bụrụ na anyị nwere nkagbu mkpọtụ mgbe niile. Otú ọ dị, a na-akọwa nnwere onwe site na ihe karịrị nke ahụ, olu anyị na-emegharị ọdịnaya ga-eme ka batrị a dịgasị iche, nke bụ eziokwu bụ na n'ime ule anyị, anyị enwetala awa ise ahụ Jabra kwere nkwa. Iji nye ha ego zuru ezu, anyị ga-achọ ihe abụọ ma ọ bụrụ na anyị na-akwụ ụgwọ ekweisi naanị na ikpe ahụ, ebe ị na-akwụ ụgwọ ngwaọrụ niile na-ewe ihe dị ka nkeji 40. N'ihe doro anya nke obodo kwụụrụ onwe ya Jabra 85t bụ ngwaahịa karịa ezuru.
Jabra Elite 85t ndị a ị nwere ike ịzụta na Amazon site na euro 229 Ha bụ ngwaahịa dị elu nke na-ele anya na asọmpi ahụ. Ha na-anapụta ihe ha kwere nkwa, na-enweghị mgbagha, mana ha ka enweghị mgbakwunye nke ịbụ ngwaahịa kachasị mma, nke nwere ike ime ka ụfọdụ ndị ọrụ chegharịa nzụta ha. Ọnụahịa ahụ dị elu, mana n'aka nke ọzọ, ụda olu dị oke mma, yana ịkagbu mkpọtụ ya.
Ọnụahịa kasị elu 85T
Ihe na: 4 2021 XNUMX
Mgbanwe ikpeazụ: 4 2021 XNUMX
Ikike ọdịyo pụrụ iche
Otu n'ime ndị kasị mma ANC na ahịa
Ọdịdị dị ala dị ala
Agbaghara m nkwado ọzọ
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụkọ akụrụngwa » General » Jabra Elite 85t, na elu nke ogo ọdịyo na nkagbu mkpọtụ